BASBAASKA BULLAACADAHA: SHARAXAADDA, NOOCYADA, BEERASHADA IYO NADIIFINTA - BOW
Sida loo koro basasha: Talooyin ku saabsan abuurista iyo daryeelka
Talooyin ku saabsan sida ay u koraan basasha, faa'iido leh ee bannaanka u ah iyo bannaanka u, inkastoo ay dulsaar iyo milkiilayaasha faa'iido iyo khibrad leh. Basasha - khudradda aan mugdi ku jirin miiska. Waa suurtagal in la qiyaaso suxuunta aan isaga ahayn.
Waxaa loo isticmaalaa cusub, la qalajiyey, loo isticmaalo in lagu sameeyo suugo, pickles, xawaash, ilaalin. Basasha sii kordhaya way adagtahay, laakiin waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhammaan talaabooyinka diyaarinta oo dooro meesha saxda ah ee basasha, iyadoo la tixgelinayo dalagyada hore.
Ma taqaanaa? Magaca "basasha" waxa uu ka yimaadaa isbarbardhig kale oo ah basasha leh khudrado kale. - beert
Basasha: sharaxaad iyo noocyo caan ah
Basasha - khudradda dilka ah ee reerka Basasha. Miraha waa basal lagu daboolo maqaarka engegan ee qallalan. Laalaab - filim leh xuubyo toosan, dhadhan qaas ah ama dhadhan macaan iyo urta dabeecadda. Iyo caanaha iyo saxarka oo ku xiran noocyada kala duwan waxay ku yimaadaan midabyo kala duwan - jaalaha, ciid, amber, lilac, guduud, cawl-caddaan, cad.
Ma taqaanaa? Basasha sida miraha qudaarta ah ayaa loo yaqaan in ka badan 4 kun oo sano.
Noocyada soo socda ayaa maanta caan ka ah: Stardust, Rostovsky, Carmen, Kupido, Lugansky, Danilovsky, Myachkovsky, Odintsovsky, Shetana, Strigunovsky, Bessonovsky, Hiberna, Centurion, Stuttgarter Rizen. Waxaa jira noocyo hore iyo ka dib oo iyaga ka mid ah, iyo ka hor inta aanad kordhin basasha, waxaad u baahan tahay inaad go'aansato kala duwan iyo muddada koritaanka nooc nooc gaar ah oo basasha.
Halkee laga gooyaa basasha: shuruudaha loogu talagalay ciidda iyo iftiinka
Basasha waxay u baahanyihiin in lagu beeray dhul qallalan, hoose oo dhulka jiifa, furan, iyada oo aan lahayn goobo bacrin ah. Basasha sida loamy ciidda, oo lagu kobciyo arrimo dabiici ah. Ciidda waa in aysan noqonin asiidh, pH ugu fiicnayd 6.5-7.8, oo leh aalado sarreeya carrada waa lime. Liming waa mar walba oo kaliya dayrta (!), Iyo ma guga ka hor beerto.
Kuwa wanaagsan ee xun
Beerka basasha koraya ayaa si wanaagsan u tegi doona ka dib marka la cuno, digirta, baradhada, yaanyada, kaabajka, digirta iyo sideratov. Ma abuuri kartid basasha kadib karootada, qajaarka, toonta iyo basasha. Laakiin karootada iyo toonta lagu beeray albaabka xiga ayaa faa'iido u leh koritaanka - cayayaanka qaar ka mid ah basasha ayaa ka baqaya urta dabacasaha iyo toonta.
Waxyaalaha gaarka ah ee beerashada basasha: waqtiga, diyaarinta wax beerto, qorshe iyo qoto dheer oo beerto
Waqtiga beerashada basasha badanaa waxay ku xiran tahay cimilada - waxay ku sii socon kartaa bartamaha xagaaga, iyo dhammaadka xagaaga, iyo xataa bilowga dayrta. Laakiin celcelis ahaan, beerista ee basasha on dabocase ka soo geedo ku sii socdaa 75-90 maalmood.
Basasha waxaa lagu beeray heerkul ciid ah oo aan ka yareyn + 12 ... +13 ° S - tani waa qiyaastii maalmaha koowaad ee bisha Abriil. Bannaanida hore ama badhtamaha bisha Abriil, dalagga ayaa laga goyn karaa dhammaadka Juun - bilaha Luulyo. Habka beerto waa caadi ahaan 8 ilaa 20 cm ama 10 25 cm, iyada oo ku xidhan noocyada kala duwan ee ballaadhan.
Waa muhiim! Ka hor inta beeritaanka basasha, abuur waa in la diyaariyaa.
Tiknoolojiga beeraha ee beerashada basasha beeritaanka baska tooska ah
Nalbada basasha, beerista taas oo laga sameeyey abuur, waxay ku lug leedahay beerto iyo daryeelka sariiraha ka duwan laga beerto geedaha basasha. Abuurka abuurka, oo loo yaqaan Chernushka, ka hor inta beero hubi biqilka. Tani waxay qaadataa 1 tsp. miraha, qoyi biyo iyo ku duub maro qoyan, dabacsan. Dhowr maalmood ka dib, waxaa la hubiyaa in ay cayayaanka u muuqdaan, haddii ay sidaas tahay, miraha waa mid waxtar leh.
Ma taqaanaa? Waxaa lagugula talinayaa inaad ku beerato chernushka hal sano ah. Inkasta oo la rumeysan yahay in abuurka basasha sii hayn jirkooda 2 sano.
Tiknoolajiyada beeraha ee basasha basasha: Ka hor intaan la beeri karin, chernushka waxaa loo kululeeyaa 20-30 daqiiqadood biyo heerkul ah 40-50 ° C, markaa waxay ku qoyaan biyo heerkulka qolka 2-3 maalmood, biyaha ayaa la badalaa hal mar maalintii si looga fogaado istaabashada.
Ka dib marka biyaha la miiro, miraha waxaa lagu dhajiyay hal lakab ah oo u dhexeeya laba xabo oo buluug ah, tuwaal khafiif ah, iyo 2-3 maalmood kadib, marka dabaylaha qiiqa iyo ruxruxda, waxay bilaabaan inay beeraan. Ku beerta ciid wanaagsan oo horay loo qoday si aad u jeexjeexdo qiyaastii 1-1.3 cm qoto dheer, laakiin aan ka badnayn 1.5 cm, fogaan ah oo ka mid ah abuurka - 2 cm, ka dibna la rusheeyaa dhulka iyo iswadaar yar.
Ka dib sariirta, waxay mulch (leh humus, peat) oo si fiican u daadi biyo waraabiyo, iyo kor ka soo waxaa lagu daboolay filim, kaas oo la saaro marka caleemaha kowaad (geedo) muuqdaan. Iyadoo labada caleemo run ah ay koraan oo ay muuqdaan basasha, waxay ku beeraan caleemaha, iyaga oo ka tagaya masaafo aan ka badnayn 2 cm inta u dhaxeysa dhirta, khafiifinta soo socota ayaa la sameeyaa ka dib muuqaalka afar caleemo run ah - hadda waxay ka tagayaan masaafada 5-7 cm.
Waa muhiim! Waqtiga khafiifintu waa in si adag loo raaco. Iyada oo khafiifinta goosashada, dalagga wuxuu noqon doonaa gacmo.
Basasha la waraabiyo bilaha kowaad ka dib biqilka - hal mar 6-7 maalmood. Ka dib markii waraabiyo - qasab la'aan qasab ah.
Sida ay u koraan basasha ilaa sevok
Bajinta koritaanka, waxaad u baahan tahay inaad ogaato waxa uu yahay Qalabka basasha. Kuwani waa basasha yar yar - 1.5-2 cm dhexroor, koray laga bilaabo abuur-macaan. Sonk waxaa loo isticmaalaa beerista xiga ee miraha waaweyn.
Si aad u hesho basal tayo fiican leh, marka hore waxay u koraan seedling, beerashada taas oo lagu fulin karo labadaba dhulka (basasha waxaa la beeray jiilaalka) iyo guriga - in weel yar oo ku yaal daaqadaha.
Agrotechnics ee beerashada basasha laga bilaabo jaka: ka hor intaan la beeri, basasha ayaa kululeynaya dhowr jeer, iyaga oo tagaya meel kasta oo qalab kulul, ilaa heerkul ah + 20 ... +22 ° S, ka dibna ilaa + 35 ... +40 ° S - waxay ku hayaan heerkul ah 3-6 maalmood. Ama biyo kulul ha ka sarreynin + 45 ... +50 ° S waa in lagu buuxiyaa 20-25 daqiiqo, ka dibna ka saar basasha isla markaana ku shub biyo qabow oo leh heerkul ah 10-12 + 12 ° S, ka dibna ku qallaji baako iyo ha ku qalajin heerkulka qolka.
Waa muhiim! Saameynta heerkulku waa lagama maarmaanka u ah nalalka - taas awgeed, waxaa suurtogal ah in laga fogaado dhismaha fallaadooyinka qaansada.
Isla markiiba ka hor beerashada sariiraha. Haddii dhulka uu qalalan yahay, wax yar ayaa qoyan. Markaas waxay jiifay grooves-grooves leh qoto dheer oo 4.5-5 cm oo sop uok, kaas oo si buuxda ku rusheeyeen ciidda oo si khafiif ah rammed. Sifeynta sariirta marka ugu horeysa looma baahna.
Sida loo daryeelo basasha beerta
Daryeelka aasaasiga ah - waa dhirbaaxo, waraabin, dabacsanaan. Uma baahnid khafiifinta of sevok, maadaama ay markii hore lagu beeray meel fog oo ku filan nalalka midba midka kale.
Ma taqaanaa? Basasha ee foomkooda cayriin marka cuno ay leedahay saameyn liddi ku ah antimicrobial, waxay kaa caawineysaa kordhinta difaaca, ka hortagga cudurada wadnaha.
Xakamaynta dhulka iyo xakamaynta cawska
Boogaha ayaa ka baxaya inta u dhaxaysa saf, iyo ka dib markii ay soo baxaan iyo hareeraha baadiyaha basasha. Xakee ciidda ka dib waraabin kasta si qoto dheer oo aan ka badnayn 5 cm.
Waraabinta iyo quudinta basasha
On su'aal ku saabsan guluubka basasha sida si fiican u kora - waraabin badan ama aan lahayn? Basasha - dhaqan aan dhab ahaantii u baahnayn biyo. Waraabinta, dabcan, waa lagama maarmaan, laakiin si dhexdhexaad ah - cimilo kulul, hubso inaad ugu yaraan 5-6 maalmoodba mar. Maalmaha kale - 1 mar 8-10 maalmood. Mararka qaarkood basasha waa la kobcin karaa iyada oo aan wax waraabin ah oo dhan - haddii xagaaga uu yahay mid diiran oo marmar ah roobab.
Waa muhiim! Waa inaad raacdaa xeerarka sida loo daryeelo basasha ka hor goosashada. Qiyaastii 30-35 maalmood ka hor goynta ka soo waraabinta beerta (iyo sidoo kale bacarin) basasha ayaa la joojinayaa.
Bannaanka ayaa inta badan xiiseynaya haddii iyo sida ay u koraan basasha waaweyn oo aan dhaymo lahayn. Mabda 'ahaan, haa, haddii ciidda ay tahay mid bacrin ah. Laakiin weli inta badan basasha waxaa la quudin jiray koboc wanaagsan iyo midho kulul.
On carrada scanty, basasha waxaa la quudin jiray 2-3 jeer - markii ugu horeysay ee height ah sheet height ah 7-9 cm, mar labaad - ka dib 2-3 toddobaad, saddexaad - kadib 3 toddobaad kale. Diyaarinta, digada digaaga oo lagu qasi jiray biyo, Doodwanaag (100 g / 5 l oo biyo ah oo ah qiyaasta socodka 2.5 l / 1 sq. M), Hure, chloride potassium, superphosphate (10-15 g / 2 sq. M) ayaa ku haboon.
Dhibaatooyinka koraya, cayayaanka waaweyn iyo cudurrada basasha
Cayayaanka ugu weyn ee basasha - basal duub, dirxiga kaas oo cuno hilibka midhaha ka soo baxa gudaha, ka dib taas oo ay ku rusheeyeen basasha iyo baadiyaha basasha u engegay. Calaamadaha ugu horreeya ee waxyeellada, dhirta bukaanka ah ayaa la soo saaraa oo la burburiyaa.
Ka hortagga duqsiga basasha samee kormeerka shubka ka hor inta aanad u dhigin kaydinta iyo daadinta (basasha waa la burburiyaa), karootada lagu beero iyo toonta ku xigta basasha, oo qodaya dhulka qoto dheer xilliga dayrta - illaa 30 cm si aad u disho jiilaalka qaboobaha carrada ka soo dhaxeeya. Waxaa sidoo kale lagula talinayaa in laga hortago sariiraha biyaha cusbada - 300-400 g oo cusbo ah / 10 litir oo biyo ah ama nuugi carrada marka loo eego qiyaasta 2: 1 iyadoo la isku daro qoryo kulul iyo boodhka tubaakada.
Cayayaanka kale waa weevil wejiga. Labada dirxiga iyo kuwa lamid ah waxay ku quudiyaan baalasha basasha, dhaawacyada ay keenaan iyaga waxay horseedi karaan burburkii caleenta iyo hoos u dhaca dhalidda ee basasha.
Kahortagga infakshanka qashinka - dabacsanaan joogto ah (dirxiga, muuqaalka dushiisa, dhinta). Soo degitaanka baska u dhow, oo ay soo weerarto weevil oo markaa la burburiyo duleelka, waa wax ku ool.
Baasto cayriin ah tubaakada iyo basasha jaranjarada iyo majarafadaha. Ka-hortagga dhacdadooda - qodaya jiilaalka carrada ugu yaraan 30 cm, loosening joogto ah, daaweynta caleemaha basasha leh infusions of celandine, basbaas qadhaadh, iniin khardal ah, tubaakada, iyo dacartii. Ama waxaad isticmaali kartaa beer-cayayaanka (cayriin), oo loogu talagalay ka-dul-qaadeyaasha.
Ka hor inta aadan basasha ka soo qaadin dhulka, hubso in uu bislaado. Waa sahlan tahay in la sameeyo - caleemaheeda waa in si buuxda loo jajabiyaa oo la foorjaraa, iyo dunta sare ee guluubka qallalan. Qaansada fuushada iyo foostada (ciddiyaha), iyada oo aan jebin.
Waa muhiim! Guluubka guluubka, oo laga helayo sheyga, kaydka saxda ah wuxuu heystaa awooda sare ee haynta - illaa 220 maalmood.
Basasha la soo ururiyey ayaa ku haray hoostooda ama hawo ku filan gudaha gudaha 2-3 toddobaad. Ka dibna kaddib markaad ka saarto xididada iyo daboolka, ama qaansada qashin qubka (wareega). Ku keydinta kaydka, waxaa fiican in aad kala saarto basasha adoo isticmaalaya qiyaasaha nalalka. Ku kaydi halkan + 16 ... +22 ° C (heerkulka qolka ku dhow) ee lagu xidho qalajinta ama sanduuqyada iyo dambiilaha. Basasha ayaa lagu keydin karaa heerkul hoose ilaa illaa +1 ° C - Maqsin, dhulka hoostiisa, qiiqa, waxyaabaha ugu muhiimsan - Ha ogolaan inta lagu guda jiro qoyaanka iyo kaydka heerkulka.
Waa wax walba oo ku saabsan basasha, taas oo marka koraan habka saxda ah waa in aysan keenin wax dhibaato ah.